အသိလေးနဲ့ ကာကွယ်ပါ(အမျိုးသမီးများဖတ်ရန်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » အသိလေးနဲ့ ကာကွယ်ပါ(အမျိုးသမီးများဖတ်ရန်)
Posted by ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) on Feb 10, 2011 in Know-How, DIY |9comments
ဒီလင့်လေးကို ..နှိပ်လိုက်ပါ..ကြိုက်တာ ထည့် ပြီးသောက်နော်..Free….
ချမ်းချမ်းရေ ဒီလို အသိပညာပေးတဲ့ စာလေးတွေတင်တာ ကောင်းပါတယ်။ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲဆိုတဲ့ စကားတောင်ရှိသေးတာပဲ။ သိပြီးသားလူလည်းပိုသိ၊ မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်လည်း သိရတော့ ဘ၀အမှားတစ်ခုကို လွန်မြောက်နိုင်ရင်ဘဲ အတော်အကျိုးများနေပါပြီ။ အားပေးပါတယ်။ချမ်းချမ်းရေ ကော်ဖီတော့ သောက်လိုက်ရပါတယ်။ .. .. .. ထွီး ခွီးခွီးးးးးးးးးး။ (သောက်ပြီးပြီးခြင်း ထွက်သောအသံ)။ အော် …….ဘယ်သူ့မှ ယုံလို့မရပါလားနော်။ (သံဝေဂရသံ)။
ဖတ်ပြီးလည်း ရှောင်သင့်တာရှောင် ဆောင်သင့်တာဆောင် အတုယူသင့်တာယူသင့်ပါတယ်။ ဖတ်ပြီးကျော်သွားလို့လည်း မထူးပါဘူး။ တင်ပြပုံရေးသားထားတာလည်း ကောင်းလှပါတယ်။
အကျိုးပြုစာတွေ ပိုစ့်တွေ ပိုတင်လာတာကို မြင်တွေ့လိုပါတယ်။
ဒီလိုအသိပညာပေးတဲ့အကျိုးပြုစာလေးတွေကိုတင်ပေးတဲ့ချမ်းချမ်းကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်….. ပိစိကွေးသူများတွေကိုလည်း ဖတ်စေချင်လို့ ကော်ပီကူးယူသွားတယ်နော်….. နောက်လည်း ဒီလိုအသိပညာပေးတဲ့ ပိုစ့်လေးတွေများများတင်ပေးပါနော်……….
မှတျသားစရာကောငျးပါတယျ — အ﻿ကောင်းဆုံးကတော့–ယောက်ကျားလေးတွေကိုမဖြေမြန်မြန်မပေးတာကောင်းတယ်–
ဘယ်နေရမဆို ဆင်ခြင်မူ့ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးပါလို့ မှတ်ရဘူးပါတယ်။
မိန်းကလေးက ဘ၀မပျက်ခြင်ရင် အလွယ်မကြိုက်ပါနဲ့လို့ တော့ မှာလိုက်ခြင်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေ အတွက် သတိပြု၊ဆင်ခြင် စရာပါ။
ဒီလို Post လေးတွေ များများရေးပေးပါ။
အသိနဲ့တင် မကဘူး သတိနဲ့ပါ နေထိုင်ပြီး ဘယ်အရာမဆို လွယ်လွယ်မယုံဖို့နဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။
အားပေးထောက်ခံပါတယ်၊ ကော်ပီကူးပြီး မျှလိုက်ပါမယ်၊
ကောင်လေးက သူ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လွှတ်ပေးတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့Character
ပိုင်းကို ပြန်စဉ်းစားဖို့ လိုတယ်။ ခွေးဆိုတာမျိုးက လူကိုကိုက်တော့မယ်ဆိုရင် သူကိုက်လို့ ရမဲ့ လူ ဟုတ်မဟုတ် အရင် အကဲခတ်သေးတယ်ဗျ။
လူတစ်ယောက်က တစ်ယောက်ယောက်ကို ကြံစည်တော့မယ်ဆိုရင် သူကြံစည်လို့ ရမဲ့ လူဟုတ်မဟုတ် အရင်ဆုံး အကဲစမ်းသေးတယ်။ အခုတလော ဆေးခတ်ပြီး ကြံလိုက်တယ် လက်ဝတ်လက်စားတွေယူသွားတယ်
ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြားပါတယ်။ စုံစမ်းကြည့်တော့ ကောင်မလေးတွေက တည်းခိုခန်းကို ခေါ်လို့ ရတဲ့ ဘာညာတွေပဲ။ ဒီလို ပိုစ့်မျိုးတွေဟာ ကောင်းပါတယ်။ သို့ သော်လည်း “၁” လို့ မြင်တဲ့သူရယ်၊ “ပ” လို့ မြင်တဲ့သူရယ်၊ “ဂ” လို့ မြင်တဲ့သူရယ်၊ “င” လို့ မြင်တဲ့သူတွေရှိနေတာကြောင့်
အခန့် မသင့်ရင် အမြင်မှားနိုင်တယ်။ မိန်းမတိုင်းဟာ စော်ကားလို့ ရတဲ့ သူတွေ မဟုတ်သလို၊ ယောကျာင်္းတိုင်းဟာ လည်း စော်ကားတတ်တဲ့ သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ အကျိုးရှိလို့အကြောင်းရှိတာပါ။
ဇာတ်ကောင် မမမျိုး ဆိုသူနဲ့ ပတ်သပ်ပြီး ဝေဖန်ကြည့်ပါမယ်။ တကယ့် အဖြစ်အပျက်လားဆိုတာကတော့ ဒီစာကို ရေးတဲ့သူက ပိုသိပါမယ်။
ဒီလိုမျိုးကို ကြံစည်သူ အများစုဟာ (ကြုံရာဆွဲတတ်တဲ့ မုဒိမ်းမှုကို မဆိုလို) စနစ်တကျ စီစဉ်ထားပြီးသားပါ။ ခတ်ဆေးကို ရှာဖွေနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ Condom ဆိုတာက အိပ်ဆောင် သဘောမျိုးကို အမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းကတဲက ဒီလိုဆေးခတ်ပြီး လုပ်ချင်တာလုပ်မယ်။ ပြီးရင် တကယ်ချစ်တာ ယူမှာ ဘာညာပြောမယ်။ မမမျိုး ဟာတောမှာ ကလေးတစ်ယောက်ကို လင်ကောင်မပေါ်ပဲ သွားမွေးရဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးရှိနေတယ်။ ဒါဆို သူ့ ကို ဒီလိုလုပ်တဲ့ဟာကို ဘာကြောင့် မဖြေရှင်းခဲ့သလဲ ။ ဟိုလူက Condom မသုံးဘူးပဲထား။ ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ အခုခေတ်မှာ အလယ်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက အစသိတယ်။ ဆက်ဆံပြီးရင် ကာကွယ်ဆေးသောက်ပြီး ကိုယ်ဝန်မရအောင် ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ အသိစိတ်ဓါတ်ဟာ တောသွားပြီး အပျိုကြီးမမ ကလေးမွေးမဲ့ အကြံအစဉ်ထက် လွယ်ကူ ရိုးရှင်းပါတယ်။
တင်ပြပုံကောင်းပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းကျောရိုးဟာ ဦးကျောက်လုံးတို့ ခေတ်က စော်ကားတဲ့ အခန်းနဲ့ တူနေပါတယ်။ တခါတည်းနဲ့ မျိုးအောင်ဖို့ ဆိုတာ ၅၀/၅၀ ပါ။ တွေးစရာ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံက တွေးကြည့်ရင် ယုတ်တိဗေဒ မကြတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးတွေ့ ရပါတယ်။ မြန်မာ မိန်းကလေး တွေဟာ (ဒါလဲ ၅၀/၅၀) ငိုစရာရှိရင်ငိုမယ်။ မုန်းစရာရှိရင် မုန်းမယ်။ ဟယ်…ဟုတ်လား ..ဘုရားဘုရား… ယောကျာင်္းတွေ တော်တော်ကြောက်ဖို့ ကောင်းပါလား…ဆိုတာမျိူးတွေ ဖြစ်လာရင် ပေးချင်တဲ့ ဆိုစ့် လွဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ဇာတ်လမ်း တချို့ ဟာ နားထောင်ချင်စရာ ဖတ်ချင်စရာ သနားစရာကောင်းတတ်ပေမဲ့ တခါတလေမှာ စေတနာဒေါသကြောင့် မူရင်းအဖြစ်အပျက်ဟာ လက်ရှိပြင်ပလောကနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ အစာသွပ် ဇာတ်လမ်းအဖြစ်ကို ရောက်ရှိတတ်တာ မြန်မာပြည်ရဲ့အမြစ်တွယ်နေတဲ့ လက်ဆင့်ကမ်း သတင်းမှတ်သားမှု အလေ့အထ တစ်ခုပါ။ တစ်ချို့ သော အမျိုးသမီးတွေပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ်တိုင်ကြည်ဖြူပြီး ဆက်ဆံခဲ့တာတောင်မှ ပြသာနာတက်လာတော့ မဟားဒရား ကျင့်ပါတယ်ဆိုပြီး လုပ်တတ်တော့လဲ…..စော်ကားတတ်တဲ့ ယောကျာင်္းတွေရှိသလို….တစ်ချို့ သော အမျိုးသမီးတွေကပေါ့ဗျာ…လို့ ပြောရင်း နိဂုံး ချုပ်လိုက်ပါတယ်။ ခွဲခြားပြီးမြင်တတ်ပါစေ။